I-Self Contained Garden Apartment 3 amaminithi ukuya olwandle
Indlu ethokomele, ehlakaniphile, enefenisha ephelele (ENTSHA ka-2021) etholakala endaweni enokuthula yaseHavre Des Pas eSt Helier. Gcoba egumbini lokuphumula futhi ujabulele inkomishi kashokoledi oshisayo.
Ifulethi liyimizuzu engu-3 nje ukusuka olwandle oluthambile, olunesihlabathi (bona izithombe) kanye ne-Howard Davis Park (indawo ethokozisayo yokuzola) kanye nohambo lwemizuzu eyi-10 ukuya emgwaqeni ophakeme kanye nasemzileni ohamba phambili wamabhasi eJersey.
Uyemukelwa ekhaya lakho usuka ekhaya eJersey.
Sihlose ukukunikeza iphasela eliphelele!
Sizamile ukwenza ifulethi elizimele libe ikhaya elivela ekhaya futhi sifuna ukukwenza uzizwe wamukelekile futhi sisebenzise izingubo zokulala ezisezingeni lehhotela kuphela, amathawula futhi sikunikeze iziphuzo ezimnandi: itiye, ikhofi, ubisi, ujamu nezinto zangasese ukuze uzizwe ulingana nehhotela. isipiliyoni.
Igumbi lokuhlala liyakhanya futhi linosofa omncane (ungahlalisa abantu ababili), itafula lokuhlala abantu abangafika ku-4, i-TV 43 inch (ENTSHA ngo-2021) (zizwe ukhululekile ukungena ku-Netflix noma kumafilimu e-Amazon ngemininingwane ye-akhawunti yakho ). Kukhona i-WIFI yamahhala etholakala kulo lonke ifulethi.
Ikhishi elisanda kufakwa (2021) linikeza izivakashi ithuba lokwenza ukudla uma zithanda futhi lifakwe kahle ngezinto zikagesi ze-NEFF okuhlanganisa ihhavini, ihhavini, isiqandisi esikhulu nesiqandisi. Kukhona neketela, i-toaster, i-microwave nezitsha ezinhle kakhulu zokupheka (amabhodwe amasha namapani, izibuko, amapuleti nezinto zokusika). Kukhona umshini wokuwasha we-NEFF/usomisi nehhashi lezingubo.
Igumbi lokulala elizimele lihlonyiswe kahle ngokulinganayo futhi linombhede owodwa (1) ophindwe kabili (OMUSHA ngo-2021) onesitoreji esiningi (ikhabethe elilodwa nesikhala ngaphansi kombhede) futhi linesokhethi le-USB lokushaja iselula yakho futhi line-tv elenga odongeni. ingathuthelwa endaweni ephelele oyifisayo. Kukhona nendawo yokomisa izinwele, i-ayina kanye nebhodi loku-ayina kanye ne-heater.
Indlu yangasese futhi ineshawa yamandla ene-cubicle enosayizi omuhle enomnyango oshelelayo, ishalofu elinamalambu aholayo ukuze libambe ishampu yakho nejeli yeshawa. Indlu yangasese iphinde ibe nomzila wesitimela oshisayo, indlu yangasese kanye nosinki. Sikunikeza amathawula amasha (okuhlanganisa namathawula olwandle ahlukene) nezinto zangasese okungukuthi i-shampoo, i-conditioner, ijeli yokugeza kanye nensipho.
Zizwe ukhululekile ukubhaka ikhekhe, ukubukela i-tv, ukufunda incwadi, ukwenza inkomishi noma ukuhlola i-inthanethi njengekhaya lakho usekhaya ekupheleni kosuku.
Ifulethi linama-shutter asanda kufakwa (Sept 2021) namakhethini obumfihlo kanye nokugcina ukukhanya kwelanga laseJersey kuphume ekuseni!
Zizwe ukhululekile ukuhlala engadini okwabelwana ngayo ukuze uphuze noma udle ngaphandle endaweni yevulandi (njengokusho kwezithombe). Sicela uqaphele ukuthi ingadi iyabelwe.
I-Havre des pas iyindawo encane enhle futhi ihamba ngezinyawo imizuzu emihlanu kuphela ukusuka esitolo esikhulu sendawo futhi ihamba imizuzu emihlanu kuphela ukusuka epaki i-Howard Davis.
I-Havre des pas inamakhefi amaningi amahle, izindawo zokudlela nezindawo zokuphuzela utshwala futhi inechibi lokubhukuda elingaphandle eliyimigwaqo emibili kude nefulethi (bona izithombe).
Kukhona indawo yokupaka izimoto emgwaqeni owodwa ukusuka efulethini futhi kodwa udinga ukukhokha ukuze upake kuwo wonke amapaki ezimoto zomphakathi eJersey ngaphandle kwangeSonto.
Sisebenza emini ngakho mayelana nokuthola okhiye, sisebenzisa ibhokisi eliphephile kodwa siyajabula ukuhlangana nawe ebusuku nokukunikeza amathiphu ezindawo ongaya kuzo futhi uzibone.
UBruce noChristina x